The sakhiray waa qalad ugu badan in la soo gudboonaado by user ee la xiriirta windows media player oo ay tahay in la xuso in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay waxaa laga codsadaa inay ka soo Baxaan arrinta gudahood mar ma at dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in tutorial ah in loo qoray arrintan la xiriira waa sidoo kale in la raaco oo wuuna akhriyey iyadoo buuxa si ay arrinta aan lagu xalin kaliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu wanaagsan ee reer qaababka sameeyo ciyaaryahan warbaahinta.
Qeybta 1: 3 xaaladood oo "Windows Media Player kala kulantay dhibaato halka ciyaaro faylka."
Qeybta 2: 3 Solutions ay u xaliyaan dhibaatada halka ciyaaro faylka
Kiisaska in halkan lagu yihiin kuwa aan xal danta guud ah oo URL ka halkaas oo xaaladahan ka mid ahi soo xulay ayaa sidoo kale lagu xusay si mustaqbalka user ayaa sidoo kale booqan kartaa naadiyada khuseeya wixii cusboonaada ee dheeraad ah:
URL: Download hadda
Original horyaalka, dhib
Ciyaaryahanka Media iyo cillad dhawaaqa internet. Fariin qalad u qornaa sidan: Windows Media Player kala kulantay dhibaato halka ciyaaro faylka. Waxaan sidoo kale sii X casaa ee soo socota si ay goortay arkayaan mp3 files marka aan isku dayo inaan u ciyaaro. Weli waxaan leeyahay cod aan pc in kastoo.
Windows Media Player ayaa sheegay in "kala kulantay dhibaato halka ciyaaro faylka". Tani waxay dhacdaa on file kasta oo aan isku dayo, in mp3, regelingen, wma. Dhammaan files yihiin drive adag deegaanka.
Tani waa xad cusub Win 8.1 64 xoogaa soo dajiyo, la WMP version 12.0.9600.17031. Ma hubo marka dambeeyey waxay shaqeeyeen, laakiin waxa uu gudahood usbuucii la soo dhaafay. Fikirro kasta?
Waxaan leeyahay clips movie fasax laga qaaday on my fiidiyo Panasonic. Waxaan leeyahay nuqul labada pc desktop iyo laptop. The faylasha loo isticmaalaa in lagu ciyaaro ok on pc labadaba, laakiin ma ciyaari doono on my desktop dambe. Waxaan isku dayay dayanayaan kuwa ciyaari ok on laptop ay dib u soo pc, laakiin mushkiladuna weli sii socoto. Waxaan sidoo kale ka furan kartaa files ku pc desktop isticmaalaya Nero warbaahinta deg deg ah siladda laakiin marka aan isku dayo in la furto Windows Media Player baan ka heli fariin qalad ah in sanduuq wada hadal leh a "Windows Media Player kala kulantay dhibaato halka ciyaaro file ka." Waxaan u maleynayay Waxaan uninstall lahaa WMP iyo dib-u-soo dajiyo laakiin ma this arki kartaa sida wax khiyaar ah in guddi ay gacanta. waxaan xaq u riixi files iyo la xiriira iyaga la Windows Media Player laakiin tani caawin waydo. files ayaa muujinaya sida Nooca ee "clip Movie" ( .MOD Extension) wixii talo ku saabsan sida aan heli karo oo ka soo kabanaya wax ku oolka ah.
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in xal u ah arrinta waa wax caadi ah ee dabiiciga ah oo ay tahay in la xiriira windows media player sida. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in talaabooyinka soo socda la raacay si user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay wax waqti ah gudahood oo dhan iyo sidoo kale helo waxa ugu fiican iyadoo la isticmaalayo dhisay in qalabka sida xal ma u baahan user si loo hubiyo in la rakibo dhinac saddexaad oo la sameeyey inuu ka baxo arrinta:
1. user u baahan yahay si loo hubiyo in daaqadaha + R isku darka la isku soo riixayo in la hubiyo in sanduuq wada hadal baxsad u muuqataa,
2.Beerta weedh in markaas waa in la qoraa makiinad waa msdt.exe -id WindowsMediaPlayerConfigurationDiagnostic si loo hubiyo in troubleshooter la furay sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
3.Beerta user markaas u baahan yahay in la hubiyo in button xiga waxa ay ku sii adkeeyey iyo user wuxuu sugaa troubleshooter ah si loo ogaado arrinta:
4.The user loo baahan yahay in wax miiran "Codso Fix this" si loo hubiyo in troubleshooter imaanayaan xalka dhibaatada la xiriira in uu leeyahay shinnida ogaado iyo tan ayaa sidoo kale loo xaliyo arrinta in buuxa:
Waxa kale oo la sheegay qofkii ugu horreeyey oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in isku darka ah ee qaraarkii in lagu soo sheegnay lagu dabaqo si loo hubiyo in arrinta la xalin ee buuxa oo ka dhigi user waxaa sidoo kale wada cafiyo. Xalka waa in kor ku xusan ka dhigan qaybta hore ee arrin guud iyo marka ay timaado qaybta labaad markaas waxa ay tahay in la xuso in user waa in la hubiyo in xal codec la xiriira waa in la raaco si loo hubiyo in user helo sameeyo xal buuxda iyo waxaa sidoo kale codsatay iyadoo kulanka si loo hubiyo in user helo shaqo sameeyey wax waqti ah gudahood oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay hubiyaan in kulankaan uu soo codsatay in arrintan la xiriira waa mid ka mid ah in uu yahay gobolka of farshaxanka oo lagu kalsoonaan karo sidii loo soo sheegnay website-ka rasmiga sameeyo. Ka dib markii yihiin tallaabooyinka ay tahay in la raaco arrintan la xiriira:
URL 1. http://filehippo.com/download_klite_codec_pack/ waa in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in page download of pack codec ee la heli:
2.Beerta download link markaas waa in la riixi si ay u helaan sanduuq wada hadal ah la isticmaalayo, taas oo user ay u baahan tahay in la hubiyo in faylka la soo bixi oo badbaadiyey:
3.Beerta Dardar markaas waa in la raaco adigoo gujinaya in la sii wado dheeraad ah ee arrintan la xiriira soo socda ilaa rakibo lagu sameeyo iyo tan ayaa sidoo kale soo gebogebeeyay habka buuxda iyo xaliyo doonaa qaladka sakhiray si buuxda:
Xalka 3: Beddelaan video in windows media ciyaaryahan qaab socon
Wondershare Video Converter Ultimate Waa barnaamij kaliya in la hubiyo in wixii kaloo la sameeyo ayaa laga yaabaa oo user helo arrinta la xalin dadaal ugu yaraan sida shuqulka oo dhan lagu sameeyo barnaamijka. Geedi socodka waa inuu kan la raacay ayaa hoos ku xusan:
1. URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html waa in la raaco si loo hubiyo in file exe la soo bixi iyo barnaamijka waxa lagu xiraa:
2.Beerta user markaas u baahan yahay in la hubiyo in interface ugu weyn waxaa loo isticmaalaa in lagu daro files ah:
3.From khaanadda saxda ah qaab media player socon waxaa markaas waa in la soo xulay in ay sii wadi:
Button diinta 4.The markaas waa inay ku sii adkeeyey tallaabadii u dambaysay:
> Resource > WMP > 3 Solutions in Windows Media Player kala kulantay dhibaato halka ciyaaro faylka